ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မပြောင်းခင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ”
“စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မပြောင်းခင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ”
မနေ့ညက အီးမေးလ်ကနေ တဆင့်ရတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတပုဒ်ရဲ့ လင့်ခ် ဖော်ပြလိုပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ပြောင်းတော့မယ်စဉ်းစားနေတဲ့ မြန်မာများအနေနဲ့ မပြောင်းခင် ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းတပုဒ်ပါ။ ဆောင်းပါးရှင်ဟာ အချက်အလက်၊ အထောက်အထားပြည့်စုံစွာနဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်စင်္ကာပူအကြောင်းရေးရင် ဒေါသသံ ပါတာ များပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရှင်ကတော့ ကျနော့်လို မဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ကို ဘေးချိတ်ပြီး အချက်အလက် ခိုင်လုံစွာနဲ့ မျှမျှတတ သုံးသပ်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်လို့ ယူဆတဲ့အလျောက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်သူတွေ ဖတ်နိုင်အောင် ဘေးဖက်မှာရော၊ အောက်ဖက်မှာပါ အမြဲတစေ ညွှန်းထားပါမယ်။ ဆောင်းပါးရှင် အမည်ကို မသိတဲ့အတွက် အမည်မဖော်ပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ရေးသူ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျနော့်ဘလော့ဂ်ပေါ်က တဆင့် ပြောလိုက်ပါရစေ။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, August 18, 2009
ရေးသူကိုယ်တိုင်ကိုရော..တဆင့်ညွှန်းပေးတဲ့ ကိုပေါကိုရော..အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်... တကယ်ကောင်းတဲ့ ဘက်စုံအမြင်နဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးပါ...နီးစပ်ရာကိုထပ်ဖြန့်လိုက်အုံးမယ်...
August 18, 2009 at 10:38 AM
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂ရက်လောက်က အီးမေးရလို့ဖတ်ပြီးပြီ။
ကြိုက်လို့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ save လုပ်ထားတယ်။
August 18, 2009 at 10:39 AM
အီးမေးရကထည်းက Print ထုတ်ပြီး ပေးဖတ်မလို့တောင် စဉ်းစားထားတယ်။
Thnks for sharing, ko paw. Really appreciate it.
August 18, 2009 at 11:27 AM
August 18, 2009 at 11:39 AM
thanks ko paw.
August 18, 2009 at 11:44 AM
အီးမေးလ်ရတော့ ကိုပေါ ရေးသလားတောင် ထင်လိုက်သေးတယ်...။
Yes. Thanks so much.
It's very obvious. we can see through easily. The one who converted to SG citizen may be something like this. "myat kan ta sae ma kyauk". May be, they never think deeply.
August 18, 2009 at 1:20 PM
Could you send to my account (notwo07@gmail.com) as I can't see or download?
August 18, 2009 at 2:05 PM
အကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါင်းထားလိုက်ပါတယ်
August 18, 2009 at 6:33 PM
စင်စင်ပြောသလိုပဲ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုပေါလားမသိဘူး ထင်နေသေးတယ်။
ကျွန်မလဲ ဘာတွေဘယ်လိုရှိတယ် သိချင်နေတဲ့ အချိန်မှာ သိလိုက်ရတာ။
August 18, 2009 at 6:46 PM
လာရောက်ဖတ်ရှုကာ ကွန်မင့်ပွတ်သွားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထင်စရာလား။ အီဖေကိုယ်ရေးရင် ဒေါနဲ့မောနဲ့လေ။း-)
August 18, 2009 at 8:07 PM
ကိုပေါရေ....ဘလော့ရှိလို့တင်ပေးတာကိုပဲတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေပြီ.. ကျွန်မနဲ့အမျိုးသားဟာဒီနိုင်ငံသားပြောင်းဖို့ကို plan B အဖြစ်စဉ်းစားထားခဲ့တာ အမျိုးမျိုးကြိုးစားနေတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံကြီး တခုကို PR လျှောက်ထားပြီး မရခဲရင် ကျမတို့ပြောင်းကြတော့မယ် လက်မတင်ကလေးပါပဲ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့အတွက်တော့ အမည်မသိရေးသားသူဟာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သောသူပါပဲ.. သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..သူလည်း ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သာတွေ့ကြုံတော့မဲ့သူပါ.. ဒီလိုရေးခွင့်ရတဲ့အတွက် ကိုပေါကိ်ုလည်းကျေးဇူးပါ......
August 18, 2009 at 10:01 PM
အခုတော့ စလုံးတွေ လည်တာ ပိုသိသွားပီ
August 18, 2009 at 11:01 PM
Maung Lin said...
စင်္ကာပူမှာ အသက်ကြီးလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့
ကိုယ့်ကို လူအိုရုံပို့ ပြီး ထောက်ပံ့ရင်
ဆေးရုံတွေမှာ မိဘဆေးရုံတတ်တဲ့အခါ သေတဲ့အခါ ဘယ်သူမှတာဝန်မယူချင်ကြလို့social workers တွေနဲ့ တရားရုံးကလိုက်ရှင်းပေးနေရပါတယ်..
August 19, 2009 at 12:08 AM
But we are already here.
Education, Health, living standard and CPF... I would say Singapore standard is still acceptable if compare with our country (Burma). This is just my own view. I don't think we can compare with People from India or China. Because their aim and our aim are totally different. They try to earn money because they have their home in their country. Some of our country man; may be family or relative back in Burma but No Home... I hope you all understand what I mean. Education is still the best. CPF is good because we don't have any pension plan in burma. At least we got some saving for our golden age.
August 19, 2009 at 5:13 AM
Tell you something...
Most of us are staying in singapre for few years with family. We need our parents to come to singapore and take care of our new born baby or child because we are working. They migh be happy with their grandchildren. So what is the diffrent between native Singaporean and new singaporean? Tell me... which burmese families from SG just ask their parents to come here and stay without ask/request to take care of grandchildren or do house work?? most of us still heed their help.... so they have to ..... So whats the big deal??
August 19, 2009 at 5:26 AM
No offended to what you said and I agreed with you , but whether the big deal or not is very subjective. Also so call y(our)Golden Age.
August 19, 2009 at 7:25 AM
Whatever the article said... it is depend on individuals. Based on own preferences. It is like an argument of vegetarians and non-vegetarians. :-)
August 19, 2009 at 9:09 AM
I went to Myanmar Embassy justafew days ago to pay income tax. I saw some Burmese to renounce Myanmar citizenship. Heard the staff there say there are people who renounce Myanmar citizenship everyday.
Frankly say, from my own view, I don't think Myanmar will develop so fast just inafew years. I'm not even sure I can see it asadeveloped country in this life time.
August 19, 2009 at 10:10 AM
PhD holder nowacabby
August 19, 2009 at 10:55 AM
Time has changed already Now in Singapore
" PhD holder nowacabby "
Last time in Burma
BA " Sake ther kim = Mutton satay "
Its Seem like improved our life style.
No matter where you stay , don't forget the where you came from.
August 19, 2009 at 11:17 AM
From my point of view (1),
How good our country's economic
and education syatem can develop?
You can see Malaysia, India and China.
Malaysia already developed but everybody can haveastable Job? Alot of people still need to come
singapore and work.
India and China also same. How long
Burma need to take time to become like malaysia, not even like Singapore.
I am not saying that SG is stable.Let's think about SG's economic go down. Do you want to go back Myanma? I don't think we have enough money to live like SG's facility or send to our kids to high quality school like ILBC.If we are holding SG passport, we can go US, Ausi and UK easier than holding Myanmar passport even though SG's economic spoiled.
August 19, 2009 at 11:32 AM
Thank you Ko Paw. Please post this article on your blog asapermanent tag. It is very subjective whether or not let ourselves,our family and our generation trap in this tiny island.
"HOME IS NOT WHERE YOU LIVE BUT WHERE THEY UNDERSTAND YOU." (Christian Morgenstren)
August 19, 2009 at 12:08 PM
အမတန်ကောင်းတဲ့တင်ပြချက်ပါ.. စေတနာထားပြီး အချိန်ကုန်ခံ ရေးသားတဲ့သူကိုရော တဆင့်တင်ပြပေးတဲ့ သူကိုရော အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တကယ်ဆို လွန်ခဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကတဲက ရေးခဲ့ရင်ပိုကောင်းမယ်..
ပြောင်းပြီးသားသူတွေဖတ်မိရင်တော့ debate လုပ်ချင်မှာ အသေအချာပါပဲ..
August 19, 2009 at 12:26 PM
from my point of view (2),
I will not agree you to change SG citizen if you are over 45 and your financial is not so stable.but if you are early 30, good educational background and good future for work and financial,
why not? i don't think CPF minimum sum is notabig deal at age of 55 or 60. we really need more than that amount for our old age because we cannot expect our children to support us. we must prepare ourself wherever you stay.
from my point of view 3,
ok let's continue. those people who have no children or singles, you can go back to myanmar anytime. so no need to change citizenship. but those having children, we have to stay at least until they graduated. so you have to think probably if you stay here with PR and Citizen for next 20 years. How big is your Lose and Gain.
THINK WITH YOUR BRAIN.
DON'T JUST BELIEVED WHAT THEY(ME) SAID
LATER, YOU ARE THE ONE WHO WILL SUFFER
August 19, 2009 at 1:14 PM
yes , it making like stepping stone if you can.
Event their Singaporean people they do not like own Country and try to leave when ever opportunity they got.
There is no rush or harsh way to do. it is all depend on individuals.
August 19, 2009 at 1:21 PM
August 19, 2009 at 1:25 PM
Theit thiet chit tal salone yal said...
“ပြောင်းပြီးသားသူတွေဖတ်မိရင်တော့ debate လုပ်ချင်မှာ အသေအချာပါပဲ..” ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။
KISS မိ တဲ့ စလုံး ASS နဲ့ ၊ မထူးတော့တဲ့ ဘဝမှာ debate လုပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုပီး လုပ်ကြမှာ သေချာတယ်။ ဟီးဟီး
August 19, 2009 at 2:34 PM
ဆောင်းပါးရေးသူ က စင်ကာပူနိုင်ငံ ကို အခြားဒေသတွင်းက သူလောက် မတိုးတက် သေးတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်ခု ကောင်းတာမကောင်းတာ ကိုဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ပါ။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘ၀အခြေအနေ ကိုလိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ဘို့ သူသိထားသမျှ မျှဝေ ပေးတာပါ. စာ လိုင်းနံ ပါတ် 'ရ' မှာ အတိအကျပြောထားပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်ဘို့ လိုပါတယ်။ဘာက်ုဘဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် ကန်လန်ံ ကာနောက်ကွယ်က အေုကာင်းဆိုတာသိထားတာ မမှားပါဘူး ။တို မြန်မာတွေက ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လာခဲ တဲ ဘ၀ထက်တော့သာတာဘဲဆိုပြီး ဘာမှ သိပ်သိအောင်လဲုကိုးစာုးက လေ့မရှိဘူး ။ It should be informed decision whatever you decide in your life.
Ta pin hte, yin hte ka salone said...
Yeah, that's right. That's what I want to say. Thanks pkw.
August 19, 2009 at 2:59 PM
I agree with what Bo Hein said. "Let's think about SG's economic go down. Do you want to go back Myanmar?"
My own answer is "No".
Don't say about future, even now, after staying in SG forafew years, when I went back to Myanmar for vacation, I feel that I'mavery free person, good for nothing person. With the education and experiences that I gained from Singapore, I don't think that I can findasuitable job in Myanmar there with Myanmar current situation.
August 19, 2009 at 5:13 PM
I believe one of the main reason that most Myanmar in Singapore want to convert Singapore citizenship is 'Double income tax'.
Hello, Anonymous August 19, 2009 5:13 PM,
No one says "u must go back to Myanmar". I suggest you should move over to other country which is better than SG. Wherever you stay, you will be the second class. So no point. Choose the better country. Beabetter second class citizen. Can or not? hehe.
August 19, 2009 at 5:35 PM
Don't ever think of kissing SG ASS.
August 19, 2009 at 5:40 PM
Anonymous August 19, 2009 5:35 PM
You hit the point.I also want to say the same to those who still don't understand what the author really wants them to know/see.
They just blindly justifying their whatever decision. ( You know, this kind of action is called " Ka lar ma kyar, nar ma kyar " ..we use to shout when we don't want to listen anything from others during our childhood. : D)
August 19, 2009 at 5:47 PM
Theit theit chit tal salone yal said...
"this kind of action is called " Ka lar ma kyar, nar ma kyar" we use to shout when we don't want to listen anything from others during our childhood."
hahahaha. hman ba byar:.
August 19, 2009 at 5:57 PM
ပြောင်းပီးသားတွေမဖတ်ပါနဲ့.. လို့ ဆောင်းပါးရေးသူက သတိပေးထားတာပါ..
August 19, 2009 at 7:12 PM
ကိုပေါရေ ကျေးဇူးပါပဲ ၊ ပြောင်းတာမပြောင်းတာ
အသာထား အကျိုးအကြောင်း စုံအောင်သိထား
ရတော့ ကောင်းတာပေါ့၊ သိထားပြီးရင် ရှေ့ဆက်
ဖို့က စာဖတ်သူ တာဝန်ပါ၊ ခိုင်ထူးဆိုသလိုပေါ့
ကတော့ print ထုတ်ထားလိုက်တယ်၊ သမီးက
စလုံးကို လာအခြေချဖို့ တာစူနေလို့လေ၊ သူ့ကို
ပြရမယ်။ ကျန်တာက သူ့အပိုင်းပေါ့။
August 19, 2009 at 7:54 PM
whether converted or not...
Some of our country PPl like to pretend... ( from Shwe Oo daung Ba Wa ta That Sar said some PPl who unabe to go Shwe Sar Yan they just go to one day trip and follow who really came bk from Shwe Sar yan to go bk Mandalay.) may be they already applied and unable to get citizen so " the grape is sour" :P Not easy to get Citizen even PR. I am sure that most of the ppl know that if they are enough to stay here and see all kind of situation.
The problem from the artical is not only newly citizen facing but also Native citizen. If you guys communicate with Native singaporean who got enough education you can hear almost everyday from them.
Same things, same matter, same problem....... from this artical discuss.... Like the author said We (Burmese) are clever enough than native singapore. So.................................................................... whats the big deal.!!
August 19, 2009 at 8:03 PM
စင်ကပူအိုင်စီအေေ၇ှ့က ခွေးတောင် ဖြတ်မလျှောက်၇ဲဘူးတဲ့။ အမြီးဖြတ်ပြီး စီတီဇင် ချပေးလိုက်မှာ ကြောက်လို့တဲ့ xxx အဟတ်ဟတ် xxx
Ba Aung said...
Don't regret yourself in the future whatever you had made up your mind or you are going to make it or you are not going to make forever for conversion of Singapore Citizen like as
"Ah. yah..why I didn't make it".
"Ah yoh.. I was so stupid and coverted".
It is very subjective and up to individual whether which is good or bad.
Your life is your own. It is free to decide. The future is yours....
August 19, 2009 at 9:03 PM
You had chosen to leave the country to seek for better opportunities else where, Singapore isavery convenient choice. If it is because of the 'double tax', it is the fault of our golden gov, we are still slaves to the stupid regime. It is not Singapore gov fault, it is the regime gov is making life difficult for their own pple. Converting to any citizenship only means better convenience, it dont change the belief and culture asaBurmese.
Love ngapii so much, can't live without it!
August 19, 2009 at 10:30 PM
>>> If we are holding SG passport, we can go US, Ausi and UK easier than holding Myanmar passport even though SG's economic spoiled.
Of course, it is easier. SG passport is listed within top 10 in the world for travel conveniences.
On the other hand, you can get visa to those countries with Myanmar passport too. It is justahassle that we need to endure it.
UK, US, Australia and Europe (Schengen) granted Multiple-Entry visa to Myanmar passport if you can convince them your intention of going there.
I haveasolid evidence. :D
August 19, 2009 at 11:34 PM
ကိုဇက်တီ ပြောတာကို ကျနော်လည်း ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော် နိုင်ငံများများတော့ မသွားဘူးပါဘူး။ သြစတေးလျ... ဖိလစ်ပိုင်... မလေးရှား နိုင်ငံတွေ သွားဖူးစဉ်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀င်ခွင့်ရပါတယ်။ သြော်ဇီကို သွားစဉ်က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိနစ် ၂၀လောက် အတွင်းမှာ မာလ်တီအင်ထရီ ဗီဇာရပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုဇက်တီရဲ့ ပို့စ်ကို ပူးတွဲဖတ်ရှုရန် ညွှန်းလိုပေမယ့် “ကမ္ဘာကွီး ပွားသလား” ဖြစ်နေတာနဲ့ ရှာလို့ မလွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
August 19, 2009 at 11:46 PM
2004 မတိုင်ခင်ထိ US Visa ကို SG ကလျှောက်ရင် အတော် လွယ်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ဗမာများလာလို့လား မသိဘူး၊ Visa လျှောက်တာ မြန်မာပြည်က အတိုင်းပဲ ခက်လာတယ်။ အသိထဲမှာ Student Visa, Social Visit Visa Reject ထိတဲ့ သူတွေ ရှိတယ်။ အားလုံး PRs or Citizens ဖြစ်ရဲသားနဲပါ။
August 20, 2009 at 12:31 AM
Yes, very interesting topic for now.
I would like to share my view here too for PR and Citizenship like others.
My first step to Sg in 1992 and decided to work and live in Sg. But unfortunately EP application was rejected at the time but I got chance to start work in 1995 with EP status. Then granted PR and finally decided to convert to Sg citizenship like others.
Stay or Go? Everyone will think definitely before they apply PR or Sg citizenship applications based on their stand points. So, no one can say right or wrong for their decisions. But like I said above, this post is very interesting topic now for Myanmar citizens who are now workings in Sg and for the new comer thinking about to convert to Sg citizen.
As for me, I decided to convert based on following: 1. Political situation in Myanmar (past, now and future) 2. Good governance and mentality of people in Myanmar (for now and future) 3. Work opportunities, applying educational knowledge, income and life style 4. Travelling by Myanmar passport or Sg passport (because I always need to travel for Co. business and every2years need to change new passport) 5. Family matters and properties.
Let me discuss above5points in detal later. I will come again here.
August 20, 2009 at 2:26 AM
Future of Singapore
(written byaSingaporean)
When I read the Straits Times article (dated 24 Sep) on PM Lee calling the young to be committed and makeadifference to Singapore, I have so much thought about the issue.
I am 35 years old, graduated from University and gainfully employed inamultinational company. But I cannot help but feel insecure over the future of Singapore. Lets face it, it’s not uncommon to hear, “when you are above 40, you are over the hill”. The government has been stressing on re-training, skills upgrading and re-adapt. The fact is, no matter how well qualified or adaptable one is, once you hit the magical 40, employers will say, “you are simply too old”.
We have been focusing our resources and problem solving on low unskilled labour. But in reality, our managerial positions and skilled labour force are actually fast losing its competitiveness. I travel around the region frequently for the past 10 years. It didn’t take me long to realise how far our neighbours have come over the past decade. They have quality skilled workers, and are less expensive. When I work with them, their analytical skills are equally good, if not better than us.
It’s not new anymore. Taxi drivers are fast becoming “too early to retire, too old to work” segment of the society. I like to talk to taxi drivers whenever I am heading for the airport. There was this driver. Eloquent and well read. He was an export manager for 12 years with an MNC. Retrenched at 40 years old. He had been searching forajob since his retrenchment. Although he was willing to lower his pay expectations, employers were not willing to lower their prejudice. He was deem too old. I wouldn’t be surprised if we have another No. 1; having the most highly educated taxi drivers in the world.
On PM Lee calling the young to be committed and makeadifference. Look around us. How dedicated can we be to Singapore when we can visualise what’s in store for us after we turned 40? Then again, how committed are employers to us? But we can’t blame them. They have bottom lines & shareholders’ gain to answer to. Onus is really on the government to revamp the society. A society that is notapressure cooker. A society that does not mirror so perfectly, what survival of the fittest is. Butasociety, where it’s people can be committed, do their best and not having to fear whether they will still wake up employed tomorrow. Sadly, Singapore does not offer such luxuries and security anymore.
On the issue of babies. The government encourage us to pro-create. The next generation is essential in sustaining our competitive edge. Then again, the current market condition is such that our future has become uncertain. There is no more joy in having babies anymore; they have become more ofaliability. It’s reallyachicken and egg issue.
Many of my peers, bright and well educated have packed up and left. It’s what MM Goh called “quitters”. It’s sad but true, Singapore no longer isaplace where one can hope to work hard their lives and retire graciously. It’s really the push factor. A future is something we sweat it out, build and call our own. Unfortunately, people like me, mid 30’s going on 40’s, staying put by choice or otherwise, we can’t help but feel what lies ahead is reallyagamble.
To PM Lee and the Ministers, we are onadifferent platform. Until you truly understand our insecurity, the future of Singapore to me remainsaquestion mark.
August 20, 2009 at 8:46 AM
To KP@SG August 20, 2009 2:26 AM
ပြောင်းပီးသားတွေမဖတ်ပါနဲ့.. လို့ ဆို
But read this. OK?
August 20, 2009 at 9:39 AM
Dear Ko Paw,
Thank you for sharing it, though I find some of the opinions in it are debatable. It's better to make well informed decision no matter which one we would take.
In my opinion, taking up Singapore citizenship doesn't necessarilyabad thing. It is justamatter of your situation and how well do you make use of it. Well...as you have written in you next post, it can be called Marriage of Convenience but making decision just for the convenience is well part of our life.
After all, what matter most is not what passport are you holding but what good deed have you done for Myanmar/Burma.
August 20, 2009 at 10:23 AM
Thanks for your comment and also for your goodwill towards Burma.
But your case is the very Identity Crisis I was trying to point out. Please go and read about Li Jiawei, the table tennis champion in Degolar blog which I put asalink in my post. In my opinion, asacitizen of Singapore, it will only be fair to support the Singapore team during the soccer match instead of supporting Myanmar team.
This is not because I don’t understand your feeling. I am just saying what is the way it should be. Suppose the war broke out between Singapore and Myanmar, which side are you goind to stand?
There involves the loyalty problem too.
That is the exact reason I wrote this post.
> After all, what matter most is not what passport are you holding but what good deed have you done for Myanmar/Burma. By KZ
August 20, 2009 at 12:06 PM
ကိုပေါရေ… ဟိုနေ့ ကတည်းက ဖတ်ပြီး ကော်မန့် တင်မလို့လုပ်တုန်း urgent meetingကြောင့် မတင်လိုက်ရဘူး…
သိပ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့… မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသေးတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ပါ…ဖတ်ပြီးတော့ အရင်က မသိခဲ့တာတွေ သိသွားတယ်…အရင်က ခပ်ဝါးဝါးသိတာတွေ ပြတ်သားသွားတယ်…ဘယ်နေရာမဆို ထိုက်တန်တဲ့
ရင်းနှီးမှုရှိမှ အကျိုးအမြတ်ရတာမို့ကိုယ်ဘယ်လောက်ရင်းလိုက်ရလဲ ကိုယ်ရင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ရလိုက်တာ တန်ရဲ့လားဆိုတာ အထပ်ထပ်အခါအခါ စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်… အလကားရတာမဟုတ်ဘူးလေ…ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက် မွန်မြတ်တဲ့စေတနာနဲ့အားထုတ်မှုအတွက် ဆောင်းပါးရှင်ကို ကျေးဇူးတင်လေးစားမိပါတယ်…မျှဝေပေးတဲ့ကိုပေါကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
thanksalot for this ko paw
even i am not staying in singapore
justaflash thought through my mind
will be good also if someone can do this kind fo analysic for Myanmar
even life in bkk is better with electricity and aircondition
but i always feel like this is not where i want to be
i always wanted to go back and do something for my life
even if it isasmall piece of help
August 20, 2009 at 2:08 PM
I am aware of Li Jiawei case and I agree that you are absolutely right for athletes case since there really have identity crisis.
But it is not the same for average Joe like us. It is not your heart and soul what Singapore is expecting when they grant youacitizenship but your next generations'. It is just impossible even if they want to. In my opinion, you don't have to feel guilty for loving the land where you grew up. You are right for the scenario of breaking war between SG and MM. But there is very slim chance of happening it.
Just to share you the news I noticed these days, Jet Li is now in Taiwan and raising fund for thyphoon victims. He had taken Singapore citizenship but he still care of his people. Still we can point out that he isacelebrity and the case is on humanitian ground.
Moreover, this isn't happening only to us. It could be one of the issues of the Age of Migration. And it is notatopic which we can reach toaconclusion withablog post orafew comments. So, I will leave it in experts hands.
PS: I remember that I haven't tell you what passport I am holding now. So, you may want to keep your own guess for yourself.
August 20, 2009 at 2:40 PM
Pls forgive my typo. "humanitarian ground" (KZ)
August 20, 2009 at 2:46 PM
Feel free to justify your decision par..it'sahuman nature, isn't it?:)
August 20, 2009 at 5:50 PM
Ko Paw.....Thanks for sharing the very interesting post with the readers. Giving up the citizenship cannot be taken lightly. But given what's happenning in Burma,it depends on the conditions that one is in.Different people in life have different priorities. For quiteanumber of people , they have no choice but take the citizenship of the better countries.I cameacross with such people ,who think about their children's education. Asian parents can sacrifice tremandously for their children.....no doubt.Double taxation is an another important factor why the Burmese take up the Singapore citizenship. I agree with the author on assessment of Singapore.However, For the time being, Singapore is notabad place to live. But for me, even though I live in one of the developped countries for more thanadecade, I have no plan to take up its citizenship. I do know that I can go back to Burma ,holding the passport of the new country that I would belong to. But my feeling would be very different . So, I take the trouble in my own ways keeping my citizenship. I do not mind paying the taxes ,which I have no choice as I go back to my country onceayear.After reading your comments , Ko Paw.....We are on the same page. For many people ,I am not pragmatic and am too sentimental as I have to apply visas whenever I want to visit the other countries. Anyway.....that is my choice. Nobody is wrong.....just ,head and tail story.We set our priorities and follow accordingly.
August 23, 2009 at 6:29 AM
Anyway, it's not most important that you guys are changing to other citizens or not. But you guys must know that you guys and all of your relations have been growing by eating rice from green fields of golden land (our country Myanmar). You guys should know where is your loyal. I don't understand why you guys are discussing about that country (Singapore) by wasting your previous time. Just do good things instead of debating about useless country.
Thanks to ko paw by posting this article on his blog.
August 23, 2009 at 1:43 PM
Someone is marketing " Singapore " here.
Ha ha , We can not escaped from sale promotion being given offer / discount everywhere with purchase with purchase like poly clinic, HDB home sale, school fees, easy visas as long as we are residing here .
Someone here said..
"Even their Singaporean people they do not like own Country and try to leave when ever opportunity they got."
I think, it would be better say, "their government" instead of Country. No country in the world is wrong.
Please remember, this is happening every where in the world like Canada, Germany, Thailand, UK, China..etc. depend on the individual thinking and planing.
Ok, then, I would like to know how many % of Burmese and Singaporean do not like their own government?
I strongly believe higher % will go to Burmese people.
Nothing is wrong with beingaSingaporean and if it is, all the 3.4 million of Singaporean will have to ...ha hahahaaa..convert to Myanmar citizen huh....Alright
Also, it is nothing wrong with beingaBurmese, like I said it is purely individual perspective and base on how you take it.
August 24, 2009 at 3:06 PM
Someone here said too...
I see only2groups here..
Group 1 : We don't blame you. It's your choice. It's subjective. It depends on individual.
Group2: No.."don't blame" is not enough. We want to hear we are right.
August 24, 2009 at 3:28 PM
BIG SINGAPORE SALE !!!!!Buy one country get one government free..:P
August 24, 2009 at 3:39 PM
Probably the best post that I have ever read...
1) Those who have converted, what are you going to do once you get laid-off, or no job as you cant turn around? (Let's say you are 38-40 and let's say again you cant getajob)
2) Those who are remain as Myanmar citizen, do you plan to stay here long or going back once you get laid off or once you reach 55 or 60? (What are you going to do in Myanmar)
August 24, 2009 at 3:49 PM
Vigor, I want to hear your answer first. Then I will answer you. Can? Really really. U answer first. let's play this game. :)
August 24, 2009 at 3:55 PM
Bwaung Taung Taung Bay Bay Gyii!
Hey!..It's you ..you answer first..:))))))))
August 24, 2009 at 4:06 PM
August 24, 2009 at 4:10 PM
Idian Man (Bombay) said...
Oh poor Burmese! poor Burmese!.
50++ years Crisis in Myanmar end up with this kind of argument. How pitiful they are!
Lucky we(Indian) are!. We never lost our home. I can feel that they lost home.
August 24, 2009 at 4:16 PM
Goh Shi Hao said...
Addition here...Mr. India Man.
Both groups lost their home. Can you see that. I also can see their broken heart.
August 24, 2009 at 4:19 PM
Very simple... just get out once you get laid-off or no job or after 55/60 and talk nonsense when you get there.
But those who can't go back, plan/do something such that you can survive. how can you blame and rely on people(government).
Once J.F.K (i hope you know JFK) said,
"Ask, what can you do for your country, don't ask what your country can do for you"
So what are you doing now?Complaining...
Are you forced to come to Singapore? Are you forced to convert to SG citizen?
If you are telling me certain countries have provided/established health care system/ pension after 55/60 or what so ever, I will tell you..
YOU GO TO THAT CERTAIN COUNTRY and I would like to see if you are qualified or not.
If your Myanmese government can provide youagood education system, why did you come here?
NUS/NTU, although it is not world top5to 10 to may be 100, you still come here and beg foraplace. If you think you are qualified enough, then you go to MIT.
if you are with your soldier government, I am 100% sure some of you will never ever become an so called Engineer. But now you see, you are lucky enough to attend certain level of U and able to getadegree and reasonably good job (here i didn't say perfect job).
SG government is not asking you to pay 10% of your salary as tax every month. (I agree, in UK this is not allowed and no Myanmese is paying this) but the main body is still your monk killer soldier government.
So no one is wrong, those who have converted and those who are not going to convert.
But some will be wrong, initially consider to convert but reluctant to proceed because of some one say something. I am not asking you to convert, but don't be influenced by someone else.
You have to be determined, focus and must be able to makeaclear and sound decision.
Nothing is perfect in this world.
So I think, I have answered the question raised by Vigor and SAICHIT.
August 24, 2009 at 4:58 PM
like what you said,
don't be influenced by someone else..
But you are influenced by me/my post.
:D:D I love it.
If you are angry, I dam love it....
Don't be influenced by someone else. Enjoy..
August 24, 2009 at 5:09 PM
Bravo! anyone else? We are collecting the answer.
August 24, 2009 at 5:10 PM
saichit..don't make the atmosphere cloudy, this is notagame or joke.
you are welcomed to participate or listen to what people said.
August 24, 2009 at 5:17 PM
So people will continue to answer? right? Really want to hear.
August 24, 2009 at 5:23 PM
Who are these two guys. Let you all know that non of your business. OK.
August 24, 2009 4:16 PM
August 24, 2009 4:19 PM
August 24, 2009 at 5:43 PM
80 comments inaweek just for an article.(Debate, argument, support, whatever..)
August 24, 2009 at 8:55 PM
Ko Paw..de ka sought htone twe ne ning gan char thar twe par lar pi loe htin te. thu doe ye comments twe ko ma lo chin pa. Thu doe yeayeathar ka de ka de ka the tin sar hte kaatie pe.
August 24, 2009 at 9:15 PM
MUHD RAZALI said...
Orang burma kehilangan tempat tinggal. Sebab itu, anda semua tidak dapat bantuan dan rasa letih. Saya berdoa agar anda semua dapat lari daripada kerajaan tentera dan bersatu semula.
August 25, 2009 at 10:55 AM
ဆောင်းပါးကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စ လုံးကိုလာခွင့်ပေး၊ကျောင်းတက်ခွင့်ပေး၊အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေး၊ PR status အခွင့်အရေး ပေးထားတာကိုက Singapore ကိုကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ စလုံးမှာ အငြိမ့်သား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကွန်ပြူတာတလုံးနဲ့ ရေးချင်ရာရေးခွင့်ရနေတာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့အုံး။ PR ဖြစ်ဖြစ် စလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ် စလုံးကိုချစ်လို့တော့မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိပါတယ်၊ ဘယ်သူမဆိုကိုယ်မွေးဖွားတဲ့နိုင်ငံကိုပဲ ချစ်နေမှာသေချာပါတယ်။ စလုံးမှာနေပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးလို့လည်းရပါတယ်။ ကိုယ်မွေးရပ်နိုင်ငံအစိုးရက သောက်တုံးမကျလို့ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့နေရာကိုထွက်လာတာလည်းမမှားပါဘူး။အချက်အလက်နဲ့ထောက်ပြထားတာတွေကမှန်နေပေမဲ့လည်း စလုံးက ရိုးရိုးလေးပဲပြောရင် တိုးတက်တယ်သင်ယူလေ့လာစရာတွေရှိတယ်ဆိုတာ ငြင်းမှာလား? အဲဒါကြောင့်လည်း ကွန်မင့်ရေးတဲ့ ရာကျော်တဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေ(ကျနော်အပါအ၀င်)ပြည်ပထွက်လာတာမဟုတ်လား။ နိုင်ငံကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ပြောကြကျေးဆို အစကတည်းက ပြည်တွင်းမှာနေပါလား၊ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ စာသွားသင်၊ ဆရာဝန်လုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်၊ လမ်းဆောက်တံတားတွေဆောက်ပါလား။ ပြည်တွင်းမှာရှိတာလေးနဲ့ရတာလေးနဲ့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။ စလုံးပြောင်းသွားရင် တကယ့်စလုံးစစ်စစ်တွေက ရွှေစလုံးတွေကို လက်ခံမှာလက်မခံတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကော မြန်မာပြည်နိုင်ငံသား မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်အိန္ဒိယတွေကို ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ? အကယ်လို့ မြန်မာပြည်အလွန်တိုးတက်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်ကိုလာကြမဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို PR ပေးကြမှာလား? မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရော ပေးနိုင်မှာလား? ကျနော်ပြောချင်တာက ကျနော်တို့အားလုံးပြည်ပမှာဘယ်သူမှပျော်နေတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပဲသတိရနေမှာပါ။ ကျနော်တို့ကိုလက်ခံနေပြီး စလုံးဖက်ကလည်းပေးနိုင်သလောက်အခွင့်အရေးလေးတွေပေးနေတာကိုက ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ကျနော်တို့ကကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့ပဲလုပ်စရာရှိတာလုပ် ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်နေဖို့ပါပဲ။၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက လောလောဆယ် ကျနော်တို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျနေအုံးမယ်ဆိုတာပဲ။ ဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေချင်တာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အကယ်လို့ကျနော်ကိုယ်တိုင်စလုံးပြောင်းသွားပြီးရင်လဲမြန်မာနဲ့စလုံးဘောပွဲမှာကိုယ့်နိုင်ငံမြန်မာကိုပဲအလိုလိုအားပေးမိမှာပဲ။ စလုံးကိုဘာလို့အားမပေးတာလဲဆိုပြီးစလုံးရဲကဖမ်းမယ်မထင်ပါဘူး။
နောက်ပြီးတရုတ်ပြည်ကတင်းနစ်သမားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲရှင်းရှင်းလေးပါ။ အကယ်လို့ကျနော်ကသာစလုံးပြောင်းပြီးသားစလုံးကိုယ်စားပြုတင်းနစ်ချံပယံဖြစ်ခဲ့ရင်လဲမြန်မာပြည်ဖွားလို့ဂုဏ်ယူမိမှာပါ၊ မိတ်ဆွေတို့ကလည်းပြောကြမှာပေ့ါ"သူကမြန်မာပြည်ကလေ"လို့ဂုဏ်ယူကြမှာပဲမဟုတ်လား? နောက်ဆုံးတော့PRဖြစ်ဖြစ်စလုံးပြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်WPပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်အခေါ်အဝေါ်ပဲပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲကျနော်ယူဆပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ခံယူချက်စိတ်ထားက မပြောင်းဖို့သာအဓိကပါ။ ကွန်မင့်ရှည်ရှည်ရေးခွင့်ပေးတာကိုပေါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
August 25, 2009 at 2:26 PM
အခုလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ အမြင်မတူကြဘူးပေါ့။
ကျေးဇူးတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောရရင် ဒီနေ့ ဒီကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံကို ဒီလိုပဲ လူတွေ ဥဒဟို သွားလာနေကြတာ.... လာခွင့်ပေးရုံနဲ့ ကျေးဇူးတင်စရာလို့ မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုသာဆို မြန်မာပြည်ကို လာကြတဲ့ တိုးရစ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း မြန်မာအစိုးရကို လာတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ်။
အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတာတွေ၊ ပီအာ ချပေးထားတာတွေဟာ တကယ်တမ်းကျေးဇူးတင်ရမှာက စင်္ကာပူအစိုးရက မြန်မာပြည်သားတွေကိုပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ အခွန်တွေ ဘဏ္ဍာတွေ၊ ကျောင်းဆရာမဆရာမတွေရဲ့ လုပ်အားတွေကို စိုက်ထုတ်ပြီး သင်ပေးလိုက်သူတွေကို စင်္ကာပူက အဆင့်သင့်ခူးစားလိုက်တာမို့ ကျေးဇူးတင်ရင် စင်္ကာပူက မြန်မာပြည်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာ နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ အဲသည်လို အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်တွေအပြင်၊ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းတွေကို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ငှားရမ်းကြရတာမို့ ဒါဟာ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူ သဘောတူညီလို့ အပြန်အလှန်ကျေနပ်ကြလို့ လုပ်ကြတဲ့ အဖြစ်တွေလို့ မြင်ပါတယ်။
ကျောင်းတက်တာကလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးတာတမျိုးပါဘဲ။ အလကားတက်ရတယ်လူရယ်လို့ အင်မတန်ရှားပါတယ်။ ကျောင်းတက်ဖို့ ချေးထားတဲ့ငွေတွေကို အတိုးနဲ့ ပြန်ဆပ်ရတာပါ။ စင်္ကာပူက အကျိုးအမြတ်အဖြစ် အဲသည် ကျောင်းပြီးတဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကို အခန့်သားရလိုက်ပါသေးတယ်။
ပီအာကိစ္စမှာလည်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်ဆီများက ကလေးမွေးနှုန်းကို ကန့်သတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ လီကွမ်းယူရဲ့ (ကလေးနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော်ပြီ) ပေါ်လစီအမှားကြောင့် ဒီကနေ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အသက်အရွယ် လူငယ်တွေ၊ လူလတ်ပိုင်းတွေ ရှားပါးနေပြီး သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ များပြားလာတာမို့ ပထမ ဆောင်းပါးရှင်ပြောတဲ့အတိုင်း အဲသည်ဝန်ကို ကူထမ်းဖို့ ပီအာတွေ ချပေးတာပါ။ ပီအာချပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စီပီအက်ဖ်ငွေတွေ လည်ပတ်ဖို့နဲ့ အိမ်တွေ ရောင်းထုတ်ဖို့ အကွက်ပေါ်သွားတာကို သတိရပါ။
ဒီကနေ့မှာ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်ကြတာဟာ ဆန်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေကစလို့ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအဆုံး လူတိုင်းထွက်လုပ်နေကြတာပါ။ အဲသည်အထဲမှာ တတိယနိုင်ငံတွေကနေ ပြည်ပကို ထွက်လုပ်တဲ့လူတွေကြောင့် အဲဒီတတိယနိုင်ငံတွေမှာလည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင်တို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့၊ သီရိလင်္ကာတို့ဆိုရင် ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းကို ပြန်ပို့တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေဟာ မနည်းမနောဘဲ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာသာ အခြေအနေက မတူတာ။ နိုင်ငံကို ချစ်တာနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ နေတာနဲ့ ဒီ ဂလိုဘယ်လ်လိုက်ဇေးရှင်းကာလကြီးမှာ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် မပြောင်းလဲသရွေ့ ဒီလူဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ပြည်ပကိုရောက်နေပါလျက် အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် သူ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ဒုက္ခတွေကြားထဲက တင်းခံပြီး အံတုနေသူတွေဟာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့ တမင်တကာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ရွေးချယ်ကြသူတွေမို့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်ကို ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အင်မတန် လေးစားပါတယ်။ အရေးကြုံတဲ့အခါ အဲဒီလို နိုင်ငံချစ်သူတွေကိုပဲ အားကိုးရတာပါ။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး တိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း ပီအာရ်တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ကူးပြောင်းလက်ခံလိုသူတွေရှိရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းနဲ့ ကြည့်ပြီး စနစ်တကျ ခွဲတမ်းချပေးရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်တွေကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ နေချင်အောင် ဆွဲဆောင်ရမှာပါ။ ပီအာပေးတန်သင့်ရင်ပေး၊ နိုင်ငံသားပေးတန်သင့်ရင် ပေး၊ ပေးကြရမှာပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်ထားပုံ၊ ခံယူချက်နဲ့ ကျနော့်ခံယူချက်နဲ့တော့ လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ မိမိနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ မိခင်နိုင်ငံပေါ်မှာပဲ သစ္စာထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျနော်ဟာ စင်္ကာပူကို အင်မတန်ချစ်လို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင် စင်္ကာပူနိုင်ငံအပေါ်မှာပဲ သစ္စာစောင့်သိရိုသေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုပဲ အားပေးမှာပါ။ ကျနော့်လူမျိုး Race ကတော့ ဘားမီးစ်ပေါ့။ ကျနော့်အနေနဲ့ မြန်မာအစားအသောက်တွေ၊ အနုပညာတွေ၊ တေးဂီတတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စွဲလန်းကောင်းစွဲလန်းနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သစ္စာတည်ရမှာကတော့ စင်္ကာပူအပေါ်မှာပဲ တည်မှာပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတော့ခံလိုက်တယ်၊ အရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုရင် စင်္ကာပူအပေါ်မှာ သစ္စာမရှိဘူး ဆိုတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူး။ ဒါက... ကျနော့်ခံယူချက်ကို သဘောအနေနဲ့ ပြောပြတာပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီတသက် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူဘို့ လုံးလုံးစိတ်မကူးပါဘူး။
ကျနော်အမြင်အရတော့.... စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူလိုက်သူများအဖို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံအပေါ်မှာပဲ သစ္စာရှိသာလျှင် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့၊ လျော်ကန်တဲ့ အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
August 25, 2009 at 7:46 PM
South paw get out..go back to your fucked nation.
August 25, 2009 at 8:24 PM
August 25, 2009 8:24 PM
ကလေးပေါကြီး.. ဟား.. ဟား
August 25, 2009 at 9:43 PM
ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းမှာမှ ဒီကိစ္စနဲ့ ကွဲကြ ပြဲကြ အမုန်းပွားကြ ရပြန်ပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ဗမာလူမျိုးဖြစ်နေကြသေးတယ်လေ။ နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ လူတွေကို ညီညွတ်အောင် စည်းရုံးရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အချစ်အကြောင်းက စ လိုက်ကြတာ အမုန်းတွေ ဒေါသတွေ အကွဲအပြဲတွေနဲ့ ဆုံးကြတော့ မှာလား။
August 26, 2009 at 1:24 AM
ကျနော်တို့ သွားနေတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ဖြစ်ပါတယ်။ တသွေးတသံတမိန့်ကို သွားနေတာမဟုတ်ပါ။ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မတူတဲ့ အမြင်တွေကို လိုက်လံပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားသူတွေကို အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ပါးစေတွေလို့ပဲ သတ်မှတ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အယူအဆတရပ်ကို အမြင်မတူကြဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် အဆိုတရပ်အပေါ်မှာ ညီညွတ်လို့ရမလဲ။ အတင်းဆွဲစေ့ဖို့ ကြိုးစားတာဟာ လက်တွေ့မကျတဲ့ လုပ်ရပ်သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အမျိုးသားညီလာခံကြီးဆိုပြီးတော့ နအဖက ချမှတ်တဲ့ အခြေခံမူတွေကိုသာ အတင်းကြီး လက်ခံခိုင်းသလိုဖြစ်နေမယ်။ အဲဒီ ညီညွတ်ရေးမျိုးကို ဓါးမိုးထားတဲ့ ညီညွတ်ရေးလို့ခေါ်တယ်။ မိတ်ဆွေလုပ်နေပုံဟာလည်း အတွေးအခေါ်အယူအဆ မတူညီရုံမျှနဲ့ ကွဲတယ်ဟ၊ ပြဲတယ်ဟ၊ ညီညွတ်အောင် မစည်းရုံးနိုင်ရင် နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးစသဖြင့် လူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို အကြောက်တရားကို ရိုက်သွင်းနေရာရောက်တဲ့အတွက် ဓါးမိုးထားတဲ့ ညီညွတ်ရေးကို နှိုးဆော်နေခြင်း တမျိုးပါပဲ။
ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာက အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ မတူညီကြသော်လည်း လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ကျနော်တို့ အခု ကြိုးစားနေကြတာ အဲသည်အရာတွေအတွက် မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်လိုချင်တာ ဘာမှန်း သေသေချာချာ သိဖို့တော့ လိုတယ်။ ကိုယ်ဘာလိုချင်တာမှန်းမသိဘဲ စွတ်ရွတ်ပြီး ညီညွတ်ကြဆိုပြီး အော်နေရင်လည်း ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်း မသိ ဆိုတာလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ရှင်းလင်းအောင် ထပ်ပြီး ဥပမာအဖြစ်ပေးရရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတူတူပဲကွာဆိုပြီး ဒုစရိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကို စည်းလုံးညီညွတ်ကြလို့ ပြောသလိုဖြစ်နေရော့မယ်။ ဒါမျိုး ဗုဒ္ဓကတောင် အားမပေးလို့ မင်္ဂလာတရားတော်မှာ အသေဝနာစဗာလနံ လို့ ဟောထားတာရှိတယ်မဟုတ်လား။ လူမိုက်နဲ့ ဝေးဝေးနေပါတဲ့။ ဆိုလိုတာက နေရာတိုင်းမှာ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ညီညွတ်နေဖို့ မလိုဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်ရမယ်။
တကယ်က အတွေးအခေါ်တွေ ဘယ်လိုပင်ကွဲပြားသော်လည်း အချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတယ်ဆိုရင် အခြေခံအားဖြင့် ဒါဟာ လုံလောက်တဲ့အချက်။ အဲဒီ အချက်ကို လက်ခံတယ်ဆိုရင်ပဲ အခြေခံအားဖြင့် ညီညွတ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
ဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံမှာ သဘောတူသယောင်နဲ့ အတွင်းကျိတ်ပြီး ကွဲလွဲနေတတ်ကြတဲ့ အဖြစ်ဟာ အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်မျိုးကို တသွေးတသံတမိန့်ကျင့်သုံးတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ကိုင်စွဲလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်လက္ခဏာပါ။
နောက်ဆုံးတချက်က.... မြန်မာလူမျိုး အချင်းချင်းဆိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများကို အတူတူလို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
ဥပမာပြောရလျှင် ပြည်မကြီးတရုတ်နဲ့ မြန်မာပြည်က တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ လူမျိုးက တရုတ်ဖြစ်တာအတူတူပေမယ့် မြန်မာပြည်အရေး၊ တရုတ်ပြည်အရေး စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အားလုံးကို တရုတ်လူမျိုးအချင်းချင်းပဲကွာလို့....ယူဆလို့ မရသလိုပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေရမှာ ဖြစ်သလို တရုတ်ပြည်မကြီးက တရုတ်အမျိုးသားတွေဟာလည်း တရုတ်ပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဖြစ်သင့်အဖြစ်ထိုက်ဆုံး သဘောသဘာဝ အကျဆုံး သဘောတရားပါ။
အလားတူ အာရပ်လူမျိုး၊ အင်ဒီးယန်း၊ ဒတ်ခ်ျ၊ စပိန်လူမျိုး၊ အီတာလျံ စသဖြင့် လူမျိုးတူသော်လည်း နိုင်ငံသားချင်းမတူလျှင် အတူတူပဲကွာလို့ ရောချလို့မရပါဘူး။ သည်လိုသာဆိုရင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အီရန်နဲ့ အီရတ်၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အာရပ်လူမျိုးအတူတူပါပဲကွာ၊ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားအတူတူပါပဲကွာဆိုပြီး ရောချလို့ မရပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိကြရတာချည်းပါ။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကြောင့် ကမ္ဘာရွာကြီးလို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေကြသော်လည်း နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေက အထင်အရှားရှိနေပါသေးတယ်။ နယ်ခြားမျဉ်းတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ချင်းတူတာတောင် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံသားက ဗီဇာမပါဘဲ လာလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အလားတူ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအဖို့လည်း မြန်မာပြည်ကို လာဖို့ ဗီဇာလိုပါတယ်။
လူမျိုးတူတာမှန်ပေမယ့် နိုင်ငံသားမတူရင် နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာ အုတ်အရောရော ကျောက်အရောရော ရောချလို့ မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာ အဲသည်လို ပြတ်ပြတ်သားသား ပိုင်းခြားမထားရင် ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ရှုတ်ထွေးကုန်မှာ အသေအချာပါ။
အဓိက ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ အကျိုးစီးပွားချင်းမတူဘူးဆိုတာ သတိပြုပါ။ ဒုတိယအချက်က သစ္စာစောင့်သိပုံခြင်း မတူဘူးဆိုတာလည်း သတိပြုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဟာ မြန်မာပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့လိုပြီး နိုင်ငံခြားသားဟာလည်း သူ့သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာစောင့်သိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
August 26, 2009 at 3:04 AM
အထဲရောက်မှ အဲလိုအော်ပီး အလုပ်လုပ်ပြပါလားဗျာ။ ဒါဆို ကျနော်တို့ ခင်ဗျားကို တကယ်အံ့သြဂုဏ်ယူ ချီးကျူးမိမှာပဲဗျ။
August 26, 2009 at 7:04 AM
Anonymous (August 26, 2009 7:04 AM)
ခင်ဗျားလို လူမျိုးတွေအတွက် ပို့စ်တပုဒ်ရည်ရွယ်ရေးထားတာရှိတယ်။ “ပြန်သာပြန်ပါ ရွှေဟင်္သာ” တဲ့။ သွားဖတ်လိုက်ဦး။း-)
August 26, 2009 at 8:49 AM
Mg Naing said...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာကတော့ ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို .. မင်းကိုနိုင်တို့ လို မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခြားနိုင်ငံသားပြောင်းတဲ့အချက်ကို ထောက်ခံမဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ.. စလုံးနိုင်ငံသားပြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး
August 26, 2009 at 12:57 PM
Majority of the writers here are rude.
Minority of the writers here are normal.
But all are Burmese.
Good luck to Burma.
Long live Daw Aung San Su Kyi.
Long live Ko Min Ko Naing.
Good luck to Singapore as well, since many rude Burmese are here in SG.
Behave. This is Public.
August 26, 2009 at 3:01 PM
True Blue Burmese said...
Who the hell are you ? (Annon :August 24, 2009 4:58 PM)
We, Burmese never called ourselves as "Myanmese"..only mouthpiece newspaper ST and Today use that name.
August 26, 2009 at 3:42 PM
Nice discussing with you, ko paw.
ကျနော်က ပီအာလည်းမဟုတ်စလုံးလည်းမဟုတ် စလုံးမှာကမ်းကပ်တော့သူငယ်ချင်းတွေပြောလို့ဆောင်းပါးကိုဖတ်မိတာပါ။ အကယ်၍ ဆောင်းပါးရေးသူက "မြန်မာပြည်မပြန်ခင်ဒီစာကိုဖတ်ပါ "ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးရေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ပေါ်လစီ၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊စီးပွားရေးတို့ဟာတွေကို အခုလိုပဲ အချက်အလက်အထောက်အထားတွေနဲ့ပေါ့။ အခုဟာက ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ စလုံးအကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့အကွက်လေးလောက်ပဲမီးမောင်းထိုးပြီးပြလိုက်တော့ စလုံးပြောင်းပြီးသားမြန်မာတွေ ပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေကို မှားနေပြီလို့ဆိုနေသလိုဖြစ်လို့ပါ။
ကိုပေါပြောတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်ဆိုလိုတဲ့ စလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာလို လက်အုတ်တချီချီနဲ့အဘအဘလို့ခေါ်ပြီး ဟိုမဒီမလုပ်ပေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ စလုံးမှာမြန်မာတွေဒီလိုအနေအထားမှာနေရနေတာကိုကမဆိုးတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ ကျနော်တို့ကဒုက္ခသည်တွေဧည့်သည်တွေလေ၊ စလုံးက အိမ်ရှင်တွေပေါ့။ ကျနော်တို့လိုဒုက္ခသည်တွေကိုအိမ်ရှင်ကထိုက်သင့်သလောက်လက်ခံပေးနေတာကိုက မဆိုးတော့ဘူး အိမ်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်မေတ္တာထားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ သကြန်ပွဲတွေ၊ အကန့်အသတ်နဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေခွင့်ပြုထားသေးတယ်လေ၊ပင်နီစူလားမှာမြန်မာဆိုင်တွေပဲမဟုတ်လား၊ စလုံးကခွင့်ပြုထားတာ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာတချို့နယ်မြေမှာဆို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ၊အဆောက်အအုံတွေတောင်ဆောက်ခွင့်မရကြဘူး။
မြန်မာအလုပ်သမားတွေပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရလိုက်လို့ သူတို့ကအမြတ်ဒါကြောင့် စလုံးက ပြန်ကျေးဇူးတင်ရမှာ မလိုအပ်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံး win-win အခြေအနေကြောင့်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်၊ မြန်မာတွေအတွက်လည်းဟန်တယ်ပေါ့။ လုပ်အားခနှိမ်တယ်ပဲထားအုံး ကျနော်တို့အတွက်အိုကေတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲပေါ့။ နောက်ဒီနေရာမှာ စလုံးတွေတိုင်းမကောင်းဘူးမမြင်သင့်ပါဘူး၊ ကောင်းတဲ့စလုံးတွေလဲရှိမှာပါ။ ပြောပြီးပြီကော ကျနော်တို့ကဧည့်သည်တွေလေ၊အိမ်ရှင်ကိုနဲနဲတော့သည်းခံရမှာပေါ့။ နောက်ဆုံးအိမ်ဖော်လုပ်ရတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတောင်မှဆန်းဒေးနေ့တော့ခွင့်ရက်အားလပ်ရက်အဖြစ်ပေးပါသေးတယ်။မြန်မာပြည်ထဲကအိမ်ဖော်တွေအပြင်တောင်မထွက်ရဘူး။စလုံးမှာလည်းသဘောကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်တွေရှိမှာပါ။
ကျနော်ကတော့ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ဗဟုသုတရဖွယ်ရာအချက်အလက်တွေကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောသလိုစလုံးက မကြာခင်ပဲကျဆင်းတော့မလို၊ စစ်ပွဲ၊လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းပဲပေါ်လာတော့မလို လုံးဝမမြင်ပါဘူး။ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖို့ ပိုအလားအလာများပါတယ်။
August 26, 2009 at 4:48 PM
(ဟဲဟဲ ရှည်လို့တဲ့ကွန်ပြူတာကပြောတယ်၊ဒါကြောင့်၂ပိုင်းဖြတ်၊ အဆက်ပြန်ထည့်လိုက်တာ)
ကိုပေါရဲ့ အကယ်လို့မြန်မာပြည်တိုးတက်လာမဲ့တနေ့မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုခွဲတမ်းချပေးမဲ့စိတ်ကူးကိုသဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တော့မထင်ပါဘူး၊ အိမ်မက်လို့ပဲပြောပါရစေ။ မိတ်ဆွေတယောက်နယ်စပ်မှာသွားလည်တုန်းက အဖွဲ့အစည်းတခုအစည်းအဝေးကိုတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်၊ ဒီမိုကရေစီကဘယ်မှာမှန်းတောင်မသိသေးဘူး၊ အနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာဘယ်ဌာနမှာဘယ်သူတာဝန်ယူမယ်စသဖြင့်ရာထူးခွဲနေကြတယ်ဆိုပဲ။ မိတ်ဆွေကပြောတယ်”၀န်ကြီးမပြောနဲ့၊ မင်းတို့ကို ဆယ်အိမ်ခေါင်းအဖြစ်တောင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး”။
စလုံးပြောင်းသွားတဲ့အသိတယောက်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတတ်နိုင်သလောက်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးလုပ်တယ်။နာဂစ်တုံးကလည်းအကြိမ်ကြိမ်အန်ဂျီအိုနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးတွေ၊ နယ်စပ်ကိုလည်းဆရာဝန်အဖွဲ့တွေနဲ့စကားပြန်အဖြစ်သွားတယ်၊ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေသွား လှူတယ်၊ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။စလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သွားလည်းမွေးရပ်မြေမြန်မာပြည်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တာပဲ။ သူ့ကိုတော့အားကျမိတယ်အမှန်ပဲ။
တကယ်တန်းကျတော့နိုင်ငံကိုချစ်တယ်သစ္စာရှိတယ်လို့ပြောနေတာ ကိုပေါကိုတော့ယုံလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ကျနော်ထင်တာကတချို့က ကိုယ်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့မြို့နေရပ်လေး၊မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေလောက်ကိုပဲသတိရသံယောဇဉ်ရှိတဲ့အတွေးပါ၊ဒီထက်မပိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကသဘာဝပါ။ မြန်မာပြန်ချင်တယ်သတိရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း တကယ်တန်းပြန်မိတော့ ခဏပါပဲ မကြာဘူး နိုင်ငံခြားကိုပြန်ထွက်ချင်တာပဲ။ ဒါကိုယ်တွေ့ပါ။ ပြည်ပမှာအနေကြာတော့ လွတ်လပ်တဲ့အရသာကိုခံစားဖူးတော့ အသန့်အပြန့်အကောင်းတွေကိုသုံးစွဲဖူးတော့ လောလောဆယ်စုတ်ပျက်နေတဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမနေတတ်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ နိုင်ငံကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါ၊ကွာခြားသွားမှုကိုဆိုလိုချင်တာပါ။ ကျနော်မြန်မာနိုင်ငံသားကဒ်ထုတ်တုန်းကလဲကျမ်းကျိန်ရတာပဲ၊ငယ်တုန်းကပေါ့၊ ဘာသစ္စာတို့နိုင်ငံချစ်တာတို့မစဉ်းစားမိပါဘူး၊ ပျော်တာလောက်ပဲဖြစ်တယ်၊ဒါပဲ။အခုစလုံးမှာနိုင်ငံသားခံယူသူတွေလဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့။စလုံးနိုင်ငံပေါ်သစ္စာတို့ဘာတို့အသာထား၊ ကျေးဇူးတော့တင်သင့်ပါတယ်။
စလုံးမပြောင်းသေးသူတွေ မပြောင်းဘူးလို့ဘူးလုံးလုံးချထားသူတွေလည်း တနေ့အရေးကြုံလာရင် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးသွားအမှုထမ်းမယ်လို့တွေးပြီး သူရဲကောင်းစိတ်နဲ့ မျှော်မနေပါနဲ့။ မြန်မာပြည်ပြောင်းသွားရင်တောင်ဟိုမှာနေရာလုပွဲတွေနဲ့ရှုတ်နေအုံးမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစာရင်းတောင်ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အသစ်တက်လာမဲ့သူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအဆက်အသွယ်တွေနဲ့နေရာပြည့်သွားပြီ။ တနေ့တော့ကောင်းသွားမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်အခုလှမ်းကြည့်တာဘာမှမမြင်ရသေးဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ စလုံးပြောင်းသည်ဖြစ်ဖြစ် ပီအာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်မှာထက်ဟန်နေရင်ကောင်းတာပါပဲ။ ပီအာက မြန်မာသံရုံးကိုအခွန်ဆောင်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ တနည်းအားဖြင့် စစ်အစိုးရကို ငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေသလိုဖြစ်နေသလား။ ဘယ်သူမှအခွန်မဆောင်ပဲနေကြည့်၊ သံရုံးတွေဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။
ရက်ပိုင်းလောက်အလည်လာတဲ့ကျနော်အတွက်တော့ စလုံးက တိုးတက်တယ်၊လှပတယ်လို့ပဲမြင်တယ်၊အမ်အာတီတွေဘစ်တွေကောင်းတယ်၊ မြန်မာပြည်ထက်တော့အများကြီးကောင်းတယ်၊ စလုံးရဲ့ပေါ်လစီတွေဘာတွေတော့နားမလည်ပါဘူး၊ အောချပ်လမ်းမကြီးကလည်းလျှောက်လို့ကောင်းသားပဲ၊စင်တိုဆာကျွန်းလဲလည်လို့ကောင်းတယ်၊ ညဖက်ဘိုးလင်းရုံမှာဘီယာလေးနဲ့လဲမဆိုးဘူးပဲ လောလောဆယ်ဒါတွေပဲမြင်မိတယ်။(သောက်ရင်းနဲ့ရေးတာဆိုတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်တော့ ဖြစ်သွားတယ် ကိုပေါရေ၊ ခင်ဗျားရဲ့ပို့စ်တွေကိုလာအားပေးနေအုံးမှာပါ)
August 26, 2009 at 4:50 PM
အိမ်း...သင်းဘောသား ဦးနှောက် ပဲလေ...။ နားလည်ပေးပါတယ်။
Ai-yooo!...no wonder lah!
That's why I told you, right? ..this country ah outside got "a lot of make-up" but inside got "urine-line" (i.e, Myat-nhar mhar tha-nut-khar, pawn mhar thay-si-gyawnn ).
But I know..that one cannot see easily lah!
We always see outside only mah.No need see inside, correct?
Urine-line also ok lah..just wear surgical mask or don't breath lah..simple, right?
You visitor ah..if you cannot understand my singlish ah..ask your friend to translate for you lor..
For Kyae-zuu ( greatful ) matter ah..don't worry lah! we will burnalot of paper money when old old one ( L--) die ah..hee..hee
August 26, 2009 at 6:00 PM
လာဖတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရော၊ အခုပို့စ်ပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်အားလပ်သွားတာနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ် တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်။
August 26, 2009 at 7:35 PM
August 27, 2009 at 12:45 AM
ကိုပေါ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ရေးထားတာ ကောင်းပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့် ဒီမိုကရေစီအရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေး စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဓါးမိုးထားတဲ့ ညီညွတ်ရေးကို နှိုးဆော်နေခြင်း ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်ဆိုလိုရင်းကို လွဲမှား နားလည်သွားတာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် အသေးစိတ် ရှင်းပြဖို့ လိုနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလည်း ငြင်းစရာမရှိပါ။ မူရင်း ဘလော့ကိုလည်း မဝေဖန်လိုပါ။ ဒါပေမယ့် ကွန်မန့်တွေမှာ ဆဲရေးတိုင်းထွာ အမုန်းပွား မိတ်ပျက်ကြတာဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောကွဲနေခြင်းလို့ ကျွန်တော် မမြင်ပါ။ ကျွန်တော်အဓိက ပြောချင်တာက ဘလော့ဂါမဟုတ်ပါ။ ပါဝင်ငြင်းခုန် ဆွေးနွေးကြတဲ့ အားလုံးကို ပြောချင်တာပါ။ ပါဝင် ဆွေးနွေးကြသူတွေရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ မတူတဲ့ အမြင်တွေကို ပိတ်ပင်လိုခြင်းလည်း ကျွန်တော့မှာ မရှိပါ။
အားလုံးမှာ တူနေနိုင်တာတွေ ကျွန်တော် ရေးကြည့်ပါမယ်။
+ စစ်အစိုးရကို မုန်းတယ်
+ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်တယ်
+ အာဏာရှင်ကို မုန်းတယ်
+ NLD ကို ကြိုက်တယ်
+ ကြံ့ဖွတ်ကို မုန်းတယ်
+ မြန်မာပြည်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်တယ်
ဒါလေးတွေကို မေ့နေကြမှာ စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကိုပေါပြန်ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး နည်းနည်းဆက် တွေးမိပါတယ်။
+ မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုလိမာလကို ဝေးဝေးရှောင် ကင်းကင်းနေခဲ့ရင် အင်္ဂုလိမာလသုတ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်။
+ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD က စစ်တပ်ကို ဝေးဝေးရှောင် ကင်းကင်းနေခဲ့ရင် မိတ္ထိလာ၊ မှော်ဘီ နဲ့ ကိုကိုကျွန်းလို နေရာမျိုးမှာ NLD နိုင်ခဲ့လိမ့်မည် မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားအရေးအခင်းတွေတုန်းက ကျွန်တော်က မပါတဲ့သူတွေကို ဘေးတီးပါတယ်။ ကျောင်းသားကြီးတစ်ယောက်က ညီလေး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်၊ မပါတဲ့သူတွေကို မပါသေးသူတွေလို့ သဘောထားရမယ်၊ သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့ မရဘူးလို့ ဝင်ပြောဖူးတာ သတိရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက အခြေခံတူကြသူ အချင်းချင်း ရန်စောင် ရန်ဖြစ်နေကြမယ့်အစား ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကို လက်ခံလာအောင် လွမ်းမိုးဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုပေါတို့အားလုံးရဲ့ အရေးအသား၊ စိတ်အားထက်သန်မှု နဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် လူတွေကို လွမ်းမိုးနိုင် သြဇာသက်ရောက်နိုင်မယ့် သူတွေလို့ ယူဆပါတယ်။ ဆတက်တပိုး တွေးခေါ်ရေးသားနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်။
August 27, 2009 at 1:24 AM
ကို Mg KNL ရဲ့ အဖြေကို နှစ်သက်တဲ့အတွက် ဒီပို့စ်က ကွန်မင့်မှာပါ လာပြန် ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Mg KNL said...
မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂလိမာလကို သူငယ်ချင်းပေါင်းသလို ပေါင်းတာမဟုတ်ပါ.. ဘယ်သူကိုမှလဲ မြတ်စွာဘုရားက ဘုရားဖြစ်ပြိးနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းပေါင်းသလိုမပေါင်းခဲ့ပါဘူး.. မြတ်စွာဘုရားက လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဥာဏ်အနုအရင့်ပေါ်မူတည်ပြီး တရားရမယ့် သူဆိုကယ်တင်တာချည်းပါ.. တကယ်ဆို အင်္ဂလိမာလဟာ ပါရမီအမတန်ရင်သန်နေတဲ့ သူပါ.. တခဏလူ(ဆရာ) အပေါင်းမှားလို့ လူမိုက်ကြီးဖြစ်နေတာပါ... ဒါကြောင့် ဘုရားက တစ်ကြောင်းပိုဒ်လောက် ဟောလိုက်တာနဲ့ အကျွတ်တရား ရသွားတာ.. ဒါကြောင့် ဘုရားကို လူမိုက်ကို အပေါင်းအသင်းလုပ်တယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူးခင်ဗျား.. ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်က စစ်တပ်က မည်သူကိုမှ ရန်သူအဖြစ်မသတ်မှတ်ခဲ့သလို သူငယ်ချင်းလို မိတ်ဆွေလိုလဲ မပေါင်းသင်းခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျား.. မူအရအသာ စစ်တပ်ကို ဆန့် ကျင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
+ မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုလိမာလကို အသေဝနာစ ဗာလာနံ လုပ်ခဲ့ရင် အင်္ဂုလိမာလသုတ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်။
+ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD က စစ်တပ်ကို အသေဝနာစ ဗာလာနံ လုပ်ခဲ့ရင် မိတ္ထိလာ၊ မှော်ဘီ နဲ့ ကိုကိုကျွန်းလို နေရာမျိုးမှာ NLD နိုင်ခဲ့လိမ့်မည် မဟုတ်။
August 26, 2009 10:49 PM
Mg KNL ခင်ဗျား
ကျွန်တော်နားလည်မှု မလွဲဟု ထင်ပါသည်။
အသေဝနာစ ဗာလာနံ ကို ကျွန်တော်မှတ်မိတာကတော့ လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွှဲလို့ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ ဆိုတာပါ။ သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်မထင်ပါဘူး။ အဓိပ္ပါယ်အတိအကျတော့ ကျွန်တော်လည်း ပါဠိမတတ်ပါဘူး။
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ကိုယ့်မှာ အမှန်တရားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် အမှားဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကို ရှောင်လွဲဖယ်ခွာပြီး ဝေးဝေး ကင်းကင်းနေတာထက် အမှန်ဘက်ရောက်လာအောင် ဆွဲဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာပါ။ သူငယ်ချင်းပေါင်းလို့ မဆိုလိုမိကြောင်းပါ။
August 26, 2009 11:42 PM
မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုလိမာလကို အသေဝနာစ ဗာလာနံ လုပ်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘုရားကိုယ်တိုင်က ဒီအချက်ကို မင်္ဂလသုတ်မှာ ထိပ်ဆုံးကထည့်ဟောပြီး.. အင်္ဂုလိမာလနဲ့ ကျမှ အသ၀နာဗာလာနံ ကို မလိုက်နာဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ထွက်နေလို့ ပါ.. နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်.. ဥပမာလေးလွဲတာကို ထောက်ပြယုံပါ..
August 27, 2009 12:16 AM
Mg KML ပြောတာ နားလည်ပါတယ်။
ပါဠိလို ထည့်မိတာ ကျွန်တော့် အမှားပါ။ "ဝေးဝေးရှောင်" လို့ ဗမာလိုရေးလိုက်သင့်တယ်။
August 27, 2009 at 10:08 AM
August 28, 2009 at 11:17 AM
Another idea on Why Most Burmese give up Myanmar citizenship
August 28, 2009 at 11:19 AM
Ko Paw Said thatအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတာတွေ၊ ပီအာ ချပေးထားတာတွေဟာ တကယ်တမ်းကျေးဇူးတင်ရမှာက စင်္ကာပူအစိုးရက မြန်မာပြည်သားတွေကိုပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ အခွန်တွေ ဘဏ္ဍာတွေ၊ ကျောင်းဆရာမဆရာမတွေရဲ့ လုပ်အားတွေကို စိုက်ထုတ်ပြီး သင်ပေးလိုက်သူတွေကို စင်္ကာပူက အဆင့်သင့်ခူးစားလိုက်တာမို့ ကျေးဇူးတင်ရင် စင်္ကာပူက မြန်မာပြည်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာ နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ အဲသည်လို အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်တွေအပြင်၊ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းတွေကို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ငှားရမ်းကြရတာမို့ ဒါဟာ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူ သဘောတူညီလို့ အပြန်အလှန်ကျေနပ်ကြလို့ လုပ်ကြတဲ့ အဖြစ်တွေလို့ မြင်ပါတယ်။
August 29, 2009 at 1:31 AM
I heard from someone was that Sg government offered Ko Paw to come and work in Singapore when he was in Myanmar or Malaysia. Not only Ko Paw but also his wife and daughter too later bcoz Sg needs like patriotic Ko Paw. So, Sg offered him again PR and he took it too with his own family by his patriotic mind (i think).
If Sg offer again some more, please let us know Ko Paw. We don't want to loose like patriot Ko Paw. Ko Paw needs to do alot of things for MM (From Sg only. Not in from MM. We can't loose Ko Paw not only to Sg but also to MM military junta too).
August 29, 2009 at 1:54 AM
Who told you one can't do things for his own country from abroad?
You can donate much needed money to the political prisoners and their families back home. You can provide computers, cameras and phones that are much helpful in the democratic movement inside Burma.
There is no secret that I have worked in Malaysia before I came to Singapore. I have written about it in my old posts. But Sg government didn't offer the job to me. I applied myself to the company I am working now.
Talking about gratefulness and appreciation, you should read even whataSingaporean blogger wrote in his blog here.
August 29, 2009 at 8:35 AM
PR isakind of "PASS" like other passes such as S-pass,EP and WP. The only difference is that you don't need to go to ICA to renew it so frequently like other passes and it gives youalonger time span to stay in SG. But it still needs to go to ICA to renew re-entry permit once in5years or 10 years.
I am not interested in who's taking PR or changing citizenship.
My point here is just to tell you what PR really means to foreigners.
And most importantly , taking PR is nothing to do with patriotism.
August 29, 2009 at 12:32 PM
KP@Thailand is kind of annoying. :P
August 29, 2009 at 3:27 PM
saichit and the rest of jokers are also kind of annoying. No Game please..No joke please
August 29, 2009 at 8:32 PM
Woo... FYI..... not for Ko Paw and Not for Burmese Singaporean....
August 30, 2009 at 12:50 AM
Hi Ko Paw,
Here is an article replied to the article topic: read before converting to Sporean.
I wish you could reply (rebuff/re-bark) to that one. I know you are resonable person, not. Definitely, debatable person. Using your style of satire even with anger voice in this issue as you mentioned in your post, I wish to read your comments between these two articles.
I support SEAMAN. This is what I want to say. Wait for Ko Paw's reply to him. See how Ko Paw write back!
September 1, 2009 at 7:47 PM
Aung နဲ့ ပီအာလည်းမဟုတ်စလုံးလည်းမဟုတ် Seaman
http://www.yeocheowtong.com/ ကိုရော ဖတ်ပြီးပီလားမသိဘူး....
September 1, 2009 at 10:32 PM
To SEAMAN: said...
SEAMAN - ကိုပေါက ရာထူးမက်လို့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါ (အားနေလို့ပါ) ဆယ်အိမ်မူးရာထူးလောက်ကို SEAMAN ပဲမက်ပါ၊ ကိုပေါက ဒို့ဘိုချုပ်လို မြန်မာပြည်လွတ်လတ်ရေးရရင်စာလေးပေလေး ရေးပြီ: အေးအေးဆေးဆေးနေမှာ (ချောင်းရိုက်ခံရလို့ သေသွားရင်တော့ ဝမ်:သာ အဲ နမြောပါတယ်)
September 2, 2009 at 1:16 PM
I support Seamam
Good explanation. Do continue
I like your actual facts.
လူတွေကလဲခက်သားပဲဗျာ။ စာရေးသူကိုတိုင်က စလုံးခံပြီးသားဆိုမဖတ်ပါနဲ့လို့ရေးထားရဲ့သားနဲ့ဆက်ဖတ်ပြီးတော့မှ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ် ဆိုပြီးရင့်ရင့်သီးသီး comments တွေရေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ အော်ဒါမှမဟုတ် စလုံးခံလိုက်လို အောက်ကလိအာ တွေဇြစ်သွားပြီး ဗမာလိုကောင်းကောင်း မဖတ်တတ်တော့လို့များလား။
October 9, 2009 at 4:10 PM
I'm m so really proud of myself as being resident at other' people own country staying legally / professionally...
I'm so so really ashamed of myself & my generation as being FOREIGNER of the rest of my whole life to my very own Native-country of myanmar / burma...
November 8, 2009 at 10:32 PM
Myo Han Htun said...
January 4, 2010 at 11:34 AM
သုံးသပ်ချက် မှ အလွန်ဗဟုသုတ ရပါသည်။ အမှန်ကိုဖော်ပြသော်လည်းပဲ ကျေးဇူး ဆိုသည်မှာ အကောင်းမြင် ၀ါဒဖြင့် ရှာကြံတင်သင့်ပါသည်။ စင်္ကာပူ အစိုးရ၏ အပြစ်များကို ဖော်ထုတ် ထောက်ပြနေသည် ထက် မိမိနိုင်ငံ တိုးတက်ရေး၊အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေး ကိုပိုမိုအလေးထား ဦးစားပေးသင့်ပါသည်။ ပစ်မှတ်ကိုဦးစား ပေးသင့်ပါသည်။ စင်္ကာပူ အစိုးရသည် အာဏာလက်ကိုင် ရှိသူကိုသာ Deal လုပ်မည်ဟု အတိအလင်းပြောကြားပြီးသားဖြစ်ပါသည်။အဓိက သည် စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား ကူးပြောင်းခြင်း မကူးပြောင်း ခြင်းမဟုတ်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ခြင်းသာ အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ Comments များအပြန်အလှန် ရေး၍ အချိန်များမကုန်ကြစေလိုပါ။ဘာမှ မဆွေးနွေး တာထက် ဆွေးနွေးသည်မှာ ကောင်းပါသည်။ လက်တွေ့ လုပ်သည်က Blog ရေးခြင်း Comments များအပြန်အလှန် ချေပပြောဆို ချင်းများထက် ကောင်းမည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ ဘာမှမလုပ် နိူင်သည်ထက် Blog ရေးနိုင်ခြင်းကလည်း အမှန်ပင် အကျိုး တစ်ချိူ့ ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ တော်လှန်ရေးကို လက်တွေ့ပါဝင် ဆင်နွှဲကြပါစို့။
January 30, 2010 at 3:06 AM
anonymous January 30
မူလ ဆောင်းပါးရျင်ရဲ့ ဆိုလိုချက်နဲ့ ခုကော်မင့် နဲ့ကဘာမှ မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။
January 30, 2010 at 8:04 AM
မရတော့ဘူး ကိုပေါရေ .. မလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင် အရမ်းကိုလုပ်ချင်နေတာ၊ မကောင်းကြောင်းရေးတဲ့ စာတောင်မဖတ်တော့ဘူး ငွေတွေစုထားတာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ ကျော်ရပြီဗျ၊ နီးလာပြီ .. နီးလာပြီ ....
အခုကျွန်တော် တွေ.တဲ့ စာတမ်းနောက်ဆက်တွဲလေးကို ပို.ပေးလိုက်ပါရစေ။
ဒီစာတမ်းမှာ တော့ စောစောက ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကြားလူတစ်ယောက် အနေနဲ. စိစစ် သုံးသပ်ပြထားပြီး - စင်္ကာပူရဲ. တကယ့် ဖြစ်ရပ် အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြထားတယ် လို.ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်...
ပထမ တစ်ခု မှာ ဒီစာတမ်းရှင် ဦးမြင့်သူ ရဲ. သုံးသပ်ထားတဲ့ အမြင်နဲ.၊ နောက်တစ်ခု မှာတော့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ.အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ UDS ရဲ. အစီရင် ခံစာ ဖြစ်ပါတယ်။ .
April 29, 2010 at 10:31 PM
ဆောရီးဗျာ- ခင်ဗျားကို နာမည်ကို စာလုံးပေါင်းမှား သွားတယ်။ ပြီးတော့ UBS နဲ့ UDS လည်း မှားသွားတယ်။ ပြန်ပြင်ပြီး ဖတ်ပေးပါ။ တကယ်တမ်း က UBS ဖြစ်ပြီး- အခု စင်္ကာပူ အစိုးရ GIC အကြီးအကျယ် ရှုံး နေတဲ့ UBS Notes နဲ. UBS share အပြောင်းအလဲ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ. အစည်း ဖြစ်ပြီး- သူတို.က နိုင်ငံတကာ မှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ. အမှန်တကယ် သုံးစွဲနိုင်မှု တွေကို စိစစ် စုံစမ်းနိုင်တဲ့ တကယ့် အဖြေမှန်ကို ဖေါ်ပြနိုင်တဲ့ အဖွဲ.အစည်း ဖြစ်ပြီး- ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်နေတဲ့- တနည်းအားဖြင့် "ငါ့အကြောင်း သိချင်ယင်၊ ငါ့မယား မေးကြည့်" ဆိုတဲ့ စ, လုံး အစိုးရ ရဲ. အနေအထား တွေနဲ. ကွာခြားပါတယ်။
April 29, 2010 at 11:08 PM
မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျနော် သွားရောက် ဖတ်ရှုပါ့မယ်။
ထို့အတူ စင်္ကာပူရဲ့ တကယ့်အခြေအနေမှန်ကို သိချင်ရင် စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ သတင်းစာတွေ၊ တီဗီတွေ သက်သက်ကိုသာ မကိုးကားဘဲ ကျနော့်ဘလော့ဂ်အောက်ခြေမှာ ပြထားတဲ့ အတိုက်အခံမီဒီယာတွေ၊ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ရေးသားချက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် စင်္ကာပူနိုင်ငံက တကယ့်ဘဝတွေကို ပူးတွဲလေ့လာမှသာ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
April 30, 2010 at 11:32 PM
မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရမယ်။
တစ်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရမယ်။
June 11, 2010 at 6:12 AM
Please note that U Thant might say as what you pointed out but he stayed in abroad till his last minutes. Why?
September 19, 2010 at 12:58 PM
This article writer hasaBlog
Published books by Author
“တပင်တည်း ရင်ထဲက ကြံဖွံ့”
“သူတို့လည်း အခြေအနေ မဟန်ဘူး”
“မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ကြီးမားသူများအကြောင်း”
“ပြန်သာ ပြန်ပါ ရွှေဟင်္သာ”
“အားလုံးပြု နဲ့ ဘူးဂျော့ သားအဖ”